Iska diyaar u ah inay la Rujiyo la Italy tareen by xilligan aad talaabo cagta eee ay ciidda weyn. dalkii reer taariikhda, naqshadaha weyn, dhaqanka wayn oo sida xarrago, dadka casri ah iyo sidoo kale-mannered noqon doontaa wax aad xusuusan doonaa ilaa maalinta ugu dambeysa!…
Si aad u dareemaan Season Holland Tulip by Tareen runta ah waa waajib kalendarka kasta oo is-ixtiraamida socotada ee xagaagaan. Muddo bil ah ama si sanad kasta, beerihii gobolka Flevoland waxaa loo beddelaa badda ah oo qurux badan oo baaxad weyn oo ubax midabo in ka badan 7…
Tareenadu in Europe waa wax weyn; waxaan jeclahay biraha our, oo waxaan iyagii u dooran doonaa in ka badan nooc kasta oo kale oo ka mid ah gaadiidka waqti kasta. Marka laga reebo ka hesho dhibic A hal dhibic B ee dheereeya ah, hab raaxo leh oo lagu kalsoonaan karo, waxaa jira wax badan oo ah ugu…
line tareenka Flam ka Flam in Myrdal ayaa la sheegay in mid ka mid ah u socdaalay tareenka ugu quruxda badan dunida, waxaana fahmi karo sababta ay. safarka kaliya ee waxay qaadataa hal saac laakiin muuqaal ah waa si dhab ah neefta-qaadashada. Ha ka maqnaan waayo-aragnimo this markii ay booqaneysay…
A line tareen cusub ayaa bilaabay, daboolaya Azerbaijan, Turkey, iyo Georgia. line wuxuu daboolayaa badan 820 Kiiloomitir oo caawinaysa dadka freights lagu daro tareenada rakaabka. marka hore, line ka noqon doono ugu horeeyay in ay ku xidhmaan Yurub iyo Shiinaha halka Goldogob Russia. The train will operate from…
Talooyin tareenka ee u socdaalaya Yurub ayaa muhiim u safra. marka hore, ay jiraan sababo badan oo kala duwan ay u safreen Yurub. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad aragto buundooyinka u qurux badan, saldhigyada tareenka, iyo muuqaal siman breathtaking. Ama laga yaabaa in aad ku socotay si ay u arkaan dhaqanka cajiib ah oo Italy. on…
Budapest sida xaqiiqada ah waa xarunta of Hungary. Waa dhibic dhexe marka ay timaado inay ku socdaalaan tareenka ee Budapest, waxaa jira tareen badan joojiyo. Iyadoo Travel by tareenka ee Budapest iyo guud ahaan waa xiiso leh iyo inta badan aragnimo cusub oo loogu talagalay dadka badan,…
Wixii oo dhan safarka ah isha halkaas kuwaas oo raadinaya meelo Europe Ieexdo tareen sababta oo ah halkii aad duubi lahayd farxadaha badhaadhaha safar tareen badan diyaarad, halkan goosin ka mid ah news weyn oo aad jecelaato. safarada tareenka Yurub kortaan maalin kasta…